Global Voices teny Malagasy » Mandehana Ao Ambadiky Ny Sehatra Miaraka Amin’i Chumel Torres, Valintenin’i Meksika Ho An’i John Oliver · Global Voices teny Malagasy » Print
Mandehana Ao Ambadiky Ny Sehatra Miaraka Amin'i Chumel Torres, Valintenin'i Meksika Ho An'i John Oliver
Voadika ny 29 Jona 2015 2:18 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Ny “El Pulso de la República,” fampisehoana manesoeso ara-politika mandeha indroa isan-kerinandro ary ampiantranoan'i Chumel Torres , dia iray amin'ireo seho YouTube malaza indrindra any Meksika. Sary: Natolotry ny Pulso de la Republica
Ity lahatsoratra ity sy ny tatitra an'onjam-peo novokarin'ilay mpamokatra Monica Campbell  ho an'ny The World  dia nipoitra  voalohany tamin'ny PRI.org  ny 23 Jona 2015, ary nalefa indray eto ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
In-droa isan-kerinandro ao an-tanànan'i Meksiko, mipetraka eo ambadiky ny latabatra i Chumel Torres, lehilahy iray madio voaharatra tsara, sahabo ho 32 taona, manoloana efijery maitso, sady mandefa lohateny tsy ankiato mikasika ireo vaovao avy any Meksika, Amerika Latina ary izao tontolo izao miaraka amina fatra mavesatry ny esoeso.
Io no seho fanalàna azy ao Meksika, maka ny fanahy sy fomba fanaon'i Jon Stewart sy John Oliver. Saingy tsy ho hitanareo ao amin'ny fahitalavitra io. Fa, satria miova ny tontolon'ny fampitàm-baovao, ao amin'ny YouTube izy. Ary mety tsara amin'i Torres izay.
Tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, ny fantsona YouTube-ny, nantsoina hoe “El Pulso de la República” (Ny Fitempon'ny Fon'ny Repoblika)”, dia nahazo mpamandrika iray tapitrisa, roa taona monja taty aorian'ny nandefasana azy, sady manana orinasa toy ny Telcel, goavana ao Meksikaamin'ny fanomezana tolotra finday, mpanohana ilay seho sy ny kaonty malazany ao amin'ny Twitter .
Nihaona tamin'i Torres sy ny ekipa matanjakany aho, tao amina trano famokarana bitika ao an-dalamben'ny tanànan'i Meksiko. Mifanohitra amin'ireo media goavana ao amin'ny firenena — TV Azteca, Televisa — izay tonga dia eo amin'ilay làlana, ny tontolon'i Torres indray teren'ny fakantsary, jiro, ny latabany ary vata fampangatsiahana feno labiera Tecate. Vao haingana, namerina ireo zava-nitranga tamin'ny fihisatry ny voka-pifidianana i Torres, ny fomban'ireo sangany ara-politikan”ny firenena hividianany tranobe amin'ny alàlan'ireo fifanarahana maloto. Mifantoka amin'ny lafiratsin'ny politika Meksikana ny fijery, ary feno porofo. Tsy atao mahagaga, izy dia mpankafy fatratra an'i John Oliver, nefa miteny izy fa hanao ny sehony “amina talenta kely sy vola kely.” Tsotra izy. Tsy mitsahatra ny mitombo be ny fijerena azy amin'ny fitarihana ireo tanora Meksikana, mosarenan'ny fitadiavana fitsaharana kely amin'ireo vaovao misy hanihany kely. Saingy manisy fanavahana eo amin'ny tenany sy Oliver izy, izay maminy noho ny fanambàrana ireo fanadihadiana matotra amin'ny fampihomehezana. “Tsy maintsy fantarinao fa avy any US i John Oliver “. Manana fahalalahana miteny izy ireo,” hoy Torres. “Eto Meksika, hanomboka hametra-panontaniana sy hilaza ny olona, ‘Hey, taiza no nahazoanao io vaovao io, fantatrao ve? Araka izany, tsy te-hanao izany aho. Ny tiako ambara dia hoe, betsaka ny olona miteny hoe ‘Hey, nahoana ianao no tsy miresaka ny tantaran'ireo mpifoka rongony?’ ‘Satria mpanjakan'ny rongony ry zareo, donto! Fantatrao? Tiako ny fomba fipetraky ny lohako eto antampon-tsoroko.’”
Azo ambara ho fiovàna asa daholo izany ho an'i Torres, izay nanomboka tamin'ny injenieran'ny mekanika. “Tia fizika aho, sady efa niasa 10 taona taminà orinasa momba izany”.
Saingy nony avy eo nahita ny Twitter izy – sady hainy tsara io, be hanihany sady maranitra ara-politika. Nitombo ny mpanjohy azy, tsikaritra ny esoesony, ary nangatahana ny mba hanoratra fampihomehezana izy. Ireo mpankafy ny You Tube-ny dia salasalan-taona ny ankamaroany, saingy efa miha-lehibe – sy tanora. Rehefa mijanona eo amin'ilay tontolo aho, mifanehatra amin'i Mariano Huerta 12 taona. Tonga niaraka tamin-drainy izy mba hijery an'i Torres mandrakitra ny seho. “Fomba iray io hahalalako vaovao nefa koa sady mihomehy kely”, hoy Huerta, izay karazan'irony mpankafy vokisan'ireo tambajotra lehibe midina an-dalam-be fotsiny ihany. Torres koa dia manasa ny sasany amin'ireo anarana goavana mitovy aminy.
Fa rehefa nisary zoro tamin'i Torres ny TV, tsia hoy izy. “Tsy manan-kevitra akory ry zareo,” hoy izy. Sady tsy mijery TV intsony koa ny olona,” hoy izy. Ankoatra izay, mahazo vola avy amin'ireo mpanohana azy izy- no sady miala voly. “Malaza be izao izahay. Tsy tiako ny hamotika an'izany,” hoy izy.
Tsy te ho sorena amina tompon'andraikitry ny tambajotra sasany mahazo tsindry mba handàka an'i Torres koa izy satria izy mandrabiraby ny filoha. “Tsy mahazo maneso ny filoha eo amin'ny fahitavi-pirenena ianao,” hoy izy. “Lojika fotsiny izay, fantatrao, satria Meksika ity. Ny tiako ho lazaina dia afaka miresaka momba an'i Obama ianao any Amerika satria Etazonia dia lafatra amin'io, fa eto, tsy afaka ianao”
Eo ampanomanana ny sehony iray hafa i Torres ankehitriny – mbola novokarina vita avy ao Meksiko ihany, saingy ho an'ny vahoakan'i Etazonia. “Efa midika izany fa hatao tanteraka amin'ny teny Anglisy ilay izy, sady ny fandrakofana ny vaovao dia ho zavatra izay mahaliana ny vondrom-piarahamonina miteny Espaniola any Etazonia.”Miaraka amin'ny fomba atao hanasongadinana an'i Torres eto, iza no mahalala? Ny sehony dia mety ho lasa fanentanana sakana ho an'ireo mpirotsaka hofidiana any Etazonia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/29/71354/